China Inconel Wave Spring abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
Intwasahlobo ye-Inconel Wave
Intwasahlobo ye-Wave yinto encinci enesangqa esenziwe ngesangqa esenziwe ngee-crest kunye neentlambo. Imithombo ye-Wave isetyenziswa ngokubanzi kwiimoto, oomatshini bempahla eyolukiweyo, izixhobo ze-hydraulic, iimoto kunye namanye amashishini. Ufakelo oluphambili kunye neenkcukacha (ubukhulu begama) kwigumbi lokuzala kufanelekile. Okanye emngxunyeni, indawo yokufaka incinci, kwaye inomsebenzi okhethekileyo wokunciphisa ingxolo kunye nokunciphisa ukungcangcazela.
Uluhlu lwangaphandle lwangaphandle lususela kwi-6mm ukuya kwi-1000mm.ububanzi be-0.4mm ukuya kwi-5.0mm.
Ubushushu obuphezulu bezixhobo zaseNtwasahlobo:
• Iintlobo zentwasahlobo:
→ Imithombo yokucinezela → Ulwandiso lwentwasahlobo
→ Torsion Spring → Entwasahlobo ukugoba
Spring Amaza entwasahlobo ♦ Skrolela Ntlakohlaza Spring Intwasahlobo yeDiski
♦ Yentwasahlobo Yentambo
Ubushushu besicelo obukhulu° C
I-SUS631 / 17-7PH
I-SUS632 / 15-7Mo
Yenza ingxubevange yentsimbi yasentwasahlobo
Ubushushu obuphezulu besiseko se-nickel
I-Inconel X-750 (GH4145)
I-800 (γ ＜ 0.2)
I-1000 (γ ＜ 0.1)
♦♦Ings Imithombo yediski ♦♦♦
Zisetyenziswa ikakhulu kwiivelufa, ii-flanges, iziqhoboshi, iziqhoboshi, iiguquli zetoriki, iswitshi enevolthi ephezulu, ukuqina kwebhawuti, inkxaso yombhobho, amasimi angothusayo kunye nokothuka. bavelise ngokungqinelana ne-DIN EN16983 (DIN2093).
Uluhlu lwangaphandle lwangaphandle lususela kwi-6mm ukuya kwi-1000mm.
Izixhobo zibandakanya ingxubevange intsimbi 51CrV4, carbon intsimbi SK85, 1074;
Isinyithi i-ASTM301, 304, 316, 17-7PH, 17-4PH, 15-7Mo;
• Intsimbi enganyangekiyo ngobushushu H13, X30WCrV53, X22CrMoV12-1, X39CrMo17-1;
• Ubushushu obuphezulu obumelana neentsimbi ezingenasici i-Inconel X750, i-Inconel X718, i-Nimonic 90, njl.
Banempawu zesiphene esincinci kunye nomthwalo omkhulu. Ikwanazo ezi zinto zilandelayo.
Imithombo yediski inokufumana iimpawu ezahlukeneyo zomthwalo ngokudityaniswa okungafaniyo kokuguqulana kunye nokugqagqana.
Xa kuthelekiswa neminye imithombo, imithombo yediski ithatha indawo encinci.
Xa kusetyenziswa amaphepha amaninzi ngokudibeneyo, isiphumo sokudambisa siyanda.
Xa isetyenziswe ngokufanelekileyo, ayizukukhubazeka okanye yaphule.
Ubomi obude bokudinwa.
Izinto zasentwasahlobo Umsebenzi woMsebenzi Tensile Strength Imodyuli Elastic KN // mm2 Chemistry%
° C Hayi / mm2 I-RT ° C 100 ° C 200 ° C 300 ° C 400 ° C 500 ° C 600 ° C C Hayi Mnu P S Kr Ni
T8A SK85 -50 ukuya +100 1200-1800 206 202 － － － － － 0.80-0.09 Ixabiso eliphantsi Ixabiso eliphantsi ≤ 0.03 ≤ 0.03 Ixabiso eliphantsi Ixabiso eliphantsi 0.25 Cu≤0.30
-50 ukuya ku-200 1200-1800 206 202 196 － － － － 0.47-0.55 ≤ 0.4 0.7 1.1 ≤ 0.025 0.025 0.9 1.2 ≤ 0.4 V: 0.1 0.25 Mo 0.1
C75 -50 ukuya +100 1200-1800 206 202 － － － － － 0.70-0.80 0.15-0.35 0.60 0.90 ≤ 0.025 0.025 ≤ 0.4 ≤ 0.4 Mo 0.1
60Si2Mn SUP6 -50 ukuya ku-200 1200-1800 206 202 196 － － － － 0.56-0.64 1.50-2.0 0.6 0.9 ≤ 0.035 0.035 Ixabiso eliphantsi Ixabiso eliphantsi
I-X 10CrNi 18-8 SUS301 -200 ukuya ku-200 1150-1500 190 186 180 － － － － 0.05-0.15 2.0 2.0 ≤ 0.045 0.015 16.0 19.0 6.0 9.5 Mo≤ 0.08
Ixabiso le-X 5CrNi 18-10SUS304 -200 ukuya ku-200 1000-1500 185 179 171 － － － － ≤ 0.07 1.0 2.0 ≤ 0.045 0.015 17.0 19.5 6.0 9.5 Ixabiso le-0.11
X 5CrNiMo 17-12-2 SUS316 -200 ukuya ku-200 1000-1500 180 176 171 － － － － ≤ 0.07 1.0 2.0 ≤ 0.045 0.015 16.5-18.5 10.0 13.0 Mo: 2.0-2.5 Ixabiso le-0.11
X 7CrNiAl 17-7 SUS631 -200 ukuya ku-300 1150-1700 195 190 180 171 － － － ≤ 0.09 ≤ 0.7 1.0 ≤ 0.04 0.015 16.0 18.0 6.5 7.8 Al: 0.7-1.5
X5CrNiCuNb 16-4 SUS630 -200 ukuya ku-300 1150-1700 195 190 180 171 － － － ≤ 0.07 1.0 1.0 ≤ 0.035 0.03 15.0 17.0 3.0 5.0
X8CrNiMoAl 15-7-2 -200 ukuya ku-300 1150-1700 195 190 180 171 － － － ≤ 0.09 1.0 1.0 ≤ 0.04 0.03 14.0 16.0 6.5 7.75 Mo: I-2.0-3.0 Al: 0.75-1.5
X39CrMo 17-1 -50 ukuya ku-400 1200-1400 215 212 205 200 190 － － 0.33-0.45 1.0 1.5 ≤ 0.04 0.03 15.5 17.5 1.0 Mo: 0.7-1.3
X 22CrMoV 12-1 -50 ukuya ku-500 1200-1400 216 209 200 190 179 167 － 0.18-0.24 ≤ 0.5 0.4 0.9 ≤ 0.025 0.015 11 12.5 0.3-0.8 V: 0.25-0.35 Mo: 0.8-1.2
X30WCrV53 SKD4 -50 ukuya ku-500 Ngowe-1470 216 209 200 190 179 167 － 0.25-0.35 0.15-0.30 0.20 0.40 ≤ 0.035 0.035 2.2 2.5 Ixabiso eliphantsi V: 0.5-0.7 W: 4-5
X40CrMoV5-1 SKD61 -150 ukuya kuma-600 1650-1990 206 200 196 189 186 158 － 0.32 0.40 0.8 1.20 0.20 0.50 ≤ 0.030 0.030 4.75 5.50 V: 0.80-1.20 Mo: 1.1-.75
Inconel X750 -200 ukuya ku-600 Ukuza kuthi ga kwi-1170 214 207 198 190 179 170 158 ≤ 0.08 Ixabiso eliphantsi 1.0 ≤ 0.02 0.015 14.0 17.0
≥ 70 Co1.0 Ti 2.25-2.75 FUmgangatho we-5.0-9.0
Inconel X718 -200 ukuya ku-600 Iiyure eziyi-1240 199 195 190 185 179 174 167 0.02 0.08 Ixabiso eliphantsi Ixabiso eliphantsi ≤ 0.015 0.015 17.0 21.0 50.0 55.0 V≤ 1.0 Mo: 0.70-1.15
I-Nimonic 90 -200 ukuya ku-700 I-1100 220 216 208 202 193 187 178 Umlinganiselo we-0.13 1.0 1.0 ≤ 0.03 0.015 18.0 21.0 Bal V15.0-21.0 Mo: 2.0-3.0 Al≤ 0.2
♦ ♦ Ubushushu obuphezulu beMpahla yeMpahla yeMpahla: ♦ ♦ ♦
♦ 304 intsimbi engatyiwa
I-304 yentsimbi engenasici ikhubazekile ngumsebenzi obandayo ukuphucula iipropathi zayo zelastiki. Ayinakuba lukhuni ngonyango lobushushu. Iya kuvelisa umazibuthe ngexesha lomsebenzi obandayo. I-304 insimbi engenasici inamandla okumelana nokubola kunye neempawu ezintle zomzimba.
♦ 316 intsimbi engatyiwa
Insimbi engenasici engama-316 ikhubazekile kukusebenza okubandayo ukuphucula iipropathi zayo zelastiki, kwaye ayinakuba lukhuni ngonyango lobushushu. Iya kuvelisa umazibuthe ngexesha lomsebenzi obandayo. I-316 insimbi engenasici iqulethe i-molybdenum, ene-corrosion enamandla kune-304 insimbi engenasici, kwaye inokumelana nokubola kwimisebenzi yamakhemikhali.
♦ I-17-7PH (GH631, 0Cr17Ni7Al)
17-7PH ukumelana efanayo umhlwa ku 304 steel stainless, nto leyo ezinokubakho yi unyango ubushushu kunye imvula lukhuni. Inamandla aphezulu kwaye inika amandla. Ukusebenza kokudinwa kungcono kune-304 insimbi engenasici kunye ne-65Mn yentsimbi yekhabhoni. Ikwanokulunga okuhle phantsi ℃ kwendalo.
I-15-7MoHoss efanayo nokumelana ne-316 insimbi engenasici. Inokuthintelwa ngonyango lobushushu kunye nokuqina kwemvula. Ine-tensile ephezulu kunye namandla okuvelisa, kwaye ukusebenza kwayo ngokudinwa kungcono kune-316 insimbi engenasici kunye ne-65Mn yentsimbi yekhabhoni. Ikwanokulunga okuhle phantsi ℃ kwendalo.
♦ I-Inconel X-750 (GH4145)
I-Inconel X-750 sisiseko semvula esisekwe nge-nickel esenza ukuba i-deformation superalloy. Isebenzisa ikakhulu i-r'phase njengenqanaba lokuqina lokuqina kwemvula. Iqondo lobushushu elicetyiswayo lingaphantsi kwama-540 ℃. I-alloy inokumelana nokubola kunye ne-oxidation ukumelana, kwaye inezinga elithile lobushushu obuphantsi.
I-Inconel 718 yimvula enesiseko se-nickel eyenza ukuqina kwe-deeral superalloy. Uluhlu lobushushu olucetyiswayo ngu -253-600 ℃. I-alloy inamandla aphezulu angaphantsi kwama-600 ° C, inokumelana nokukhathala, ukuxhathisa i-radiation, ukumelana ne-oxidation kunye nokuxhatshazwa kwe-corrosion, kunye nokusebenza kakuhle kokusebenza kunye nokuzinza kwexesha elide.
♦ I-A-286 (GH2132, SUH660)
I-alloy A-286 sisiseko esenziwe ngentsimbi esomeleza ukuqina kwe-alloy ephezulu. Iqondo lobushushu elicetyiswayo lingaphantsi kwe-540 ℃. I-alloy inamandla aphezulu kunye neqondo eliphantsi lobushushu kunye nozinzo lwexesha elide, ukumelana okuhle nokumelana nokusebenza kwe-thermal, kwaye ine-plasticity efanelekileyo yokusebenza kunye nokusebenza kwe-welding eyonelisayo.
Egqithileyo I-Monel 400 yeoyile yokutyubhisha ioyile
Okulandelayo: Isitayile seAlloy Ring / Shaft sleeve
Inconel 600 wave wave
inconel 625 wave entwasahlobo
inconel 718 wamaza entwasahlobo
Intsimbi ye-inconel wave
nimoinc 80a Wave entwasahlobo
I-TIG / MIG ERNiFeCr-2 Inconel 718 yeWelding Wire